Fihaonan’ny Jamba: Ny Goalball Sy Ny Fikarakarana Zaridaina · Global Voices teny Malagasy
Fihaonan'ny Jamba: Ny Goalball Sy Ny Fikarakarana Zaridaina
Voadika ny 21 Oktobra 2011 7:45 GMT
Toy ny ahoana ny fiainana ho an'ny fianakaviamben'ireo jamba any Thessaloniki, Gresy? Ilay bilaogy [el] vaovao avy amin'ny tetikasa tohanan'ny Rising Voice, Blind Dates, na Fihaonan'ny Jamba, dia manome varavarankely momba ny hetsika ataon'ireo mpitoraka bilaogy vaovao isan'andro avy any amin'ny Fianarana ho an'ireo Jamba any Thessaloniki sy ny Fikambanamben'ireo Grika. Ireo mpitoraka bilaogy rehetra dia mahazo tombony amin'ny teknolojian'ny famakiana fàfana (lecteur d'écran) mba hanoratana itony lahatsoratrana bilaogy itony, sy ireo sasany izay misafidy ny hamoaka mivantana amin'ny fampiasana ny safidy mailaka ao amin'ny WordPress.com.
Teknolojia hiampitàna Arabe.
Taloha, ireo mponina jamba tany Thessaloniki dia tsy maintsy niankina tamin'olona mba hanampy azy ireo hiampita ny arabe be mpivezivezy ao an-tanàna. Na eo aza izany, araka ny voalazan'ny mpitoraka bilaogy Thanasis Chatzipantou, amin'izao fotoana izao ireo mponina jamba dia manana namana sarobidy – ny feon'ireo takelaby fandrindrana fifamoivoizana. Eto izy dia manoratra fa misy ireo fitaovana napetraka amin'ireo jiron'ny fifamoivoizana, izay mamoaka feo mampahafantatra rehefa maitso na mena ny jiro [el].
Ireo olona manana areti-maso dia mahatakatra rehefa maitso na mena ny jiro fandrindrana fifamoivoizana avy amin'ny alàlan'ireo feo avoakany. Samy hafa ny feo avoakany rehefa mena na maitso ny lokon'ny jiro. Ireo feo fampahafantarana ireo dia voapetraka anatin'ireo jiro fandrindrana fifamoivoizana maro any Athens sy Thessaloniki, ary tanàna vitsy hafa ao amin'ny firenena. Indrisy anefa fa tsy hita any amin'ireo tanàna rehetra sy tanin'i Gresy izany, na dia tokony hisy aza izany satria misy olona manana olana ara-pahitana na aiza na aiza ary manan-jo hiaina tahaka antsika izy ireo……….
Fanandramana sy Filalaovana ny Goalball
Tamin'ny taona 1946, ny fanatanjahan-tena goalball dia noforonina mba ho làlana iray entina itsaboana ireo nanana olana ara-pahitana noho ny Ady Lehibe II. Lasa fanatanjahan-tena iraisam-pirenena izy io amin'izao fotoana, ary lalaovin'ny sasany amin'ireo Mpitoraka bilaogin'ny Blind Dates. Lalaovina ekipana olona telo izany lalao izany ka ny tanjona dia ny hanipazana baolina any amin'ny tsatobin'ny ekipa mpifanandrina. Misy lakilosy ity baolina manokana ity, izay manampy ireo mpilalao hahafantatra ny toerana alehan'ilay baolina. I Vassilis Stamoulakis dia mitoraka bilaogy momba ny fanapahan-keviny hilalao ny goalball, sy ny nahatonga ny fiafaran'izany ho mbola sarotra noho ny noeritreretiny. Nandany fotoana kely ny fahaizany ilay lalao, nefa niaraka tamin'ny fanampian'ny mpampiofana sy ny fiezahany, vetivety izy dia nahita fivoarana. Manoratra[el] izy [el]:
Ny vokany? Tena tiako tanteraka ny goalball, ary mbola manohy izany lalao izany aho ka ankehitriny dia mandray anjara amin'ireo fifaninanana. Araka ny hevitro dia tokony hanandrana izany ireo izay manana olana ara-pahitana tahaka ahy. Ataovy fotsiny dia jereo ny fitsipi-dalao!
Ny Fikarakaràna Zaridaina, Fialamboly Manala Sorisory
Ny sasany amin'ireo fialamboly mahazatra ireo tanora jamba any avaratr'i Gresy dia mifandraika amin'ny Aterineto, hira, na karazana fampiasam-batana hafa. Nefa fialamboly iray miavaka, tahaka ny ataon'ilay bilaogera Stratos, dia mampiditra ny tontolo ivelany amin'ny alàlan'ny fikarakaràna zaridaina. Manoratra izy fa fialamboly izay nampafantarin'ny raibeny tany amin'ny vohitr'i Panagiouda izy io…….
Na dia ilaina aza ny fanampian'ny hafa amin'ny asa sasany tahaka ny fampiasàna fanapahana mandeha amin'ny motera na ireo fanondrahana, afaka manao ny ankamaroan'ireo asa hafa i Stratos, ary vokatr'izay dia afaka mankafy ireo voatabia, baranjely, ary sakaibe izay amboleny amin'ny tànany manokana. Faranany[el] amin'ny hoe [el]:
Te-hamporisika ny olona aho mba hiasa amin'ny fambolena legioma noho ireo vokatsoa azo avy amin'izany, izay ny lehibe indrindra dia ny fahafaham-po tsapan'ny olona rehefa mahita ny fitomboan'ny voa nafafy izay aty aoriana dia hamokatra voankazo. Hanohy hamboly sy hikarakara ireo voninkazo aho satria tiako ny dingana rehetra ary ny fivoahako any ivelany dia samy hafa amin'ireo endrika fialamboly hafa sy ireo karazana fanalàna sorisory